Umzi-mveliso weRivet oMgangatho oyimfama-uMvelisi weRivet oMgangatho weemfama waseTshayina, ababoneleli
I-aluminiyam idome blind rivet yomelele, uhlobo olutsha lwe-fastener yoluhlu olubanzi lwezicelo.
Yenziwe nge-alloy ekumgangatho ophezulu we-aluminiyam, ayikhe irusile, inokumelana ne-corrosion, yomelele, ikhaphukhaphu, kwaye yomelele.
Dome Head Blind Rivet Steel Stainless
Ezi Rivets zenziwe nge-High Quality Stainless Steel yenye yeendlela eziphezulu zokuxhathisa umhlwa, iyenza ihlale ixesha elide kunezinye iihardware ezikwimarike namhlanje.
I-hardware yethu yomelele kakhulu kwaye ilungele ukusetyenziswa ngaphakathi nangaphandle.Iirivets ezingenasici ziphezulu kunentsimbi eqhelekileyo kwaye zibonelela ngokugqwesa kokugqwesa kokugqwala kwizicelo zamanzi etyuwa.
Intloko yeDome eyimfama iRivet eneMizobo enemibala
Inika amandla adibeneyo okudibanisa imveliso ngexesha lokudibanisa ngelixa uphucula ukubonakala kwayo.Enye indlela yokuphucula okanye ukwenza ngokwezifiso ukubonakala kwe-rivet kukongeza umbala ngokupeyinta.Imveliso yethu ifanelekile kuluhlu olubanzi lwezicelo apho umbala wongezwa okanye uhambelana.
I-Aluminiyam ye-CSK yeNtloko eyimfama iRivet
Iimveliso zethu zigqwesile ngokusetyenzwa, kulula ukuzigcina, kunye nokulawula ngokungqongqo umgangatho.Inobuso obugudileyo, ukumelana nokugqwala, uxinzelelo oluhle kunye noxinzelelo olunamandla.
I-Steel epheleleyo ye-CSK yeNtloko eyimfama iRivet
Siyinkokeli ekhokelayo kumvelisi weerivethi ezingaboniyo eTshayina, iimveliso zethu zigqwesile ngokusetyenzwa, kulula ukuzigcina, kunye nokulawula ngokungqongqo umgangatho.Inobuso obugudileyo, ukumelana nokugqwala, uxinzelelo oluhle kunye noxinzelelo olunamandla.Umphumo we-riveting ulungile kwaye isakhiwo sihlangene.
I-Stainless Steel epheleleyo ye-CSK Intloko eyimfama eyi-Rivet
I-countersunk rivet yinxalenye ehlanjululwa yi-deformation yayo okanye i-interference connection.Intloko ye-screw ifakwe ngokupheleleyo okanye incinci kwisiqwenga esidibeneyo.Esi sakhiwo sisoloko sisetyenziswa kwizicelo apho umphezulu usicaba kwaye ugudileyo, njengomgangatho wesixhobo.